3 mazano ekugadzira mafomu anokwezva ebhizinesi rako repamhepo | ECommerce nhau
Kuti mafomu epamhepo abudirire, vanofanirwa kutanga vapinda kuburikidza nemaziso. Zvikasadaro, kwete chete iwe unozopererwa nedata, asi ivo vachazviona sekuyedza kuwana ruzivo rwepachivande urwo vasiri vazhinji vari kuda kupa.
Mibvunzo inoshatirisa, dhizaini yakaipa, dhizaini dhizaini ... kana uchida gadzira mafomu anokwezva ebhizinesi rako repamhepo, usarega kuverenga zvatakakugadzirira; zvinokwanisika kuti neizvi iwe uchave wakavimbisa kubudirira paInternet.
1 Ndeapi mafomu?
2 Basa remafomu
2.1 Vaka kuvimbika kwevatengi
2.2 Tengesa chinhu
2.3 Nyoresa ma sweepstakes
2.4 Kumbira rumwe ruzivo
2.5 Unganidza data
3 Izvo zvinonyanya kukosha mafomu epamhepo
3.1 Mapfupi, mafupi mafomu
3.2 Ipa chimwe chinhu mukudzoka
3.3 Tsanangura ZVAKANAKA kwazvo zvaunoda iyo fomu data
4 Iwo akanakisa mazano emafomu epamhepo anokupa iwe moyo
4.1 Tarisa zvigadzirwa zvinogadzirisa
4.2 Iko kumashure kwakakosha
4.3 Munguva yeinternet, zvinyorwa zvinonyatsooneka
Fomu repamhepo riri chishandiso chinonyanya kushandiswa kuunganidza ruzivo kubva kune vashanyi kune peji. Chinangwa ndechekuti vanhu ava vapindure yakateerana yemibvunzo uye iyo data inova chikamu che "chakavanzika" dhatabhesi rebhizimusi pacharo.
Paunenge uchishandisa fomu, basa rayo harisi pachena. Uye kwete nekuti iwe hauzive kuishandisa nemazvo, asi nekuti ine akawanda acho.
Muchokwadi, fomu rinogona kushandiswa ku:
Vaka kuvimbika kwevatengi
Semuenzaniso, kuitira kuti mushandisi anyore uye ave nedata rake rekumutumira zvinyorwa, zvinopihwa, mitengo ...
Chokwadi iwe wakambopinda peji rakashambadzira chigadzirwa uye, pachinzvimbo chekukupa iwe chinongedzo, chakakupa fomu yekuti ivo vakufonere. Zvakanaka kuenda kumba kwako kuti ndikuzivise icho chigadzirwa, kana kuita musangano.
Ehe, iri zvakare rimwe remabasa emafomu.
Nyoresa ma sweepstakes
Vanhu vazhinji uye vazhinji vari kumhanya-mhanya uye, nekuda kweizvi, unofanirwa kusiya data rako. Asi ndosaka vanhu vachigadzira mamwe maakaundi (kuitira kuti yese spam nezviri mukati zvavasingade zvisazvinetse).
Kumbira rumwe ruzivo
Ivo vakajairika, semuenzaniso, mukudzidziswa. Paunoona kosi inokufadza iwe, panzvimbo yekukuudza kuti ndiani anoidzidzisa, vanodyara fomu raunofanira kuzadza kuitira kuti vakufonere nefoni.
Kwenguva yakati ikozvino, fomu iri zvakare rinoshandiswa nevadzidzi vazhinji kuita ongororo. Vari zvakafanana neyaunowana mumugwagwa uye ivo vanoda kuti iwe uzadze ongororo (kana pavanokufonera). Kubva pane aya data, ivo vanogadzira dzidziso.
Asi mune bhizinesi repamhepo munhu anogona kufunga mune iyi kesi, semuenzaniso, mukuita ongororo nezve sevhisi, kana paine chimwe chinhu chekuvandudza, nezvimwe.
Izvo zvinonyanya kukosha mafomu epamhepo
El Chinangwa chefomu repamhepo ndechekuti izadzwe. Fungidzira kuti uri pachiitiko, uine tsapo yakanaka yemapeji, imwe neimwe fomu yevanhu. Uye ichi cue hachina kufambisa peji rimwe chete, ndiko kuti, vanhu vanozviona, vanocherekedza mibvunzo iyo yavanofanira kupindura, voisiya. Kukundikana zvachose.
Kana iwe usiri kuda kuti chinhu chimwe chete chiitike kune ako epamhepo mafomu, iwe unoda aya mazano atinofunga. Ivo havazofanotaura kubudirira, asi iwe uchaita zvese zvinogoneka kuti zviite kuti zvishande, zvimwe zvese zvinoenderana nezvese izvo izvo fomu zvinosanganisira kuitira kuti uvagombedze kuti vasiye yavo data.
Naizvozvo, ramba uchifunga zvinotevera:
Mapfupi, mafupi mafomu
Chinhu chakaipisisa chaungaite pane fomu kubvunza mibvunzo yakawanda. Paunowedzera iwe kuisa mukati mayo, ndipo paanozeza kuramba munhu iyeye achazozvipindura nekuda kwezvikonzero zviviri: chimwe, chinogona funga kuti zvinotora nguva yakareba kuti uizadze (uye nguva yake imari, kuti arege kuiparadza iwe). Kashoma pavanenge vachida kuzviita, chete kana iwe wakanyatsovagonesa kare; uye maviri, kuti kana iwe ukakumbira yakawandisa data, havazoone nemaziso akanaka vachikupa iyo ruzivo (Muchokwadi, ivo havangapindure kana kuti vanosiya yakasiya peji rako).
Chii chekuita ipapo? Tsvaga chete iyo data yaunonyatsoda. Hapana chimwe.
Ipa chimwe chinhu mukudzoka
Ruzivo chinhu chakakosha. Iwe urikukumbira munhu kuti akupe iwe zvakavanzika uye zvakavanzika ruzivo, uye chii chaanogamuchira nekudzoka? Chinhu chakachengeteka kwazvo ndechekuti iwe umufonere, unyore iye uye pakupedzisira achazozvidzima kubva pane yako runyorwa kana iye asingafarire. Saka, mukutsinhana iyo data, nei usingazvipe kurudziro? Ebook, inogona kurodha pasi, demo, kunyangwe diki diki kuti ikubatsire.
Tsanangura ZVAKANAKA kwazvo zvaunoda iyo fomu data
Zvinoratidzika kunge zvakapusa, asi chaizvo iyo Kuva pachena kunogona kukubatsira iwe mune rako bhizinesi repamhepo. Uchifunga kuti makambani mazhinji "anotengesa" ruzivo rwevashandisi, kujekesa kuti nei uri kuvabvunza kunovabatsira kuti vavimbe newe.
Semuenzaniso, kana iwe uchida kuti vatumire email, wadii kuvaudza? Vaudze kuti unozviita kangani, mhando yeemail neruzivo rwese rwavanofanira kuziva. Kana vakakuona uchitsanangura zvese kwavari, ungangove unobudirira pane iyo fomu.
Iwo akanakisa mazano emafomu epamhepo anokupa iwe moyo
Iye zvino zvaunoziva mafomu epamhepo zviri nani zvishoma, heano mamwe mazano ekuti dzive dzinokwezva uye kukurudzira vashandisi kuti vadzipindure:
Tarisa zvigadzirwa zvinogadzirisa
Isu takasurukirwa nezvakareruka dhizaini, saka, zvichienderana newebsite yako, unogona kuwana imwe iri chikamu chemufananidzo, mufananidzo, nezvimwe.
Semuenzaniso, muti apo bazi rimwe nerimwe riri mubvunzo pane fomu. Ruvara iwe rwaunowana runogadzira fomu racho rakavharwa uye haritaridzika kunge fomu pacharo, asi inowanikwa kune vashandisi kuti vashandise.
Iko kumashure kwakakosha
Fungidzira kuti uri muvezi uye iwe unoda kuti vatengi venguva yemberi vakusiire iyo ruzivo. Zvakanaka, iwe unogona kugadzira iyo kumashure senge yaive nehuni hunyanzvi. Kana bhokisi rematanda sepakeji. Dzimwe nguva, kufunga nezveiye anomiririra bhizinesi zvinokubatsira iwe kugadzira fomu yekutanga.
Munguva yeinternet, zvinyorwa zvinonyatsooneka
Tiri kuwedzera kuwedzera kushandisa pakombuta, panharembozha ... Vashoma kwazvo vachiri netsika yekunyora nemaoko, kana kutora zvinyorwa. PaInternet izvi hazvinyanyo kuoneka, asi ko kana iwe ukaishandisa kukwezva kutariswa mune fomu rako?
Unogona kubheja pane inonakidza uye inonakidza dhizaini kuti itaridzike senge yakanyorwa neruoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » 3 mazano ekugadzira mafomu anokwezva ebhizinesi rako repamhepo
6 matipi eakanaka eCommerce kusimudzira zano